ရောက်တတ်ရာရာ (ဓါတ်ပုံပိုစ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ရောက်တတ်ရာရာ (ဓါတ်ပုံပိုစ်)	7
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 9, 2015 in Photography |7comments
တစ်ခါ တစ်ခါ အလုပ်ပိတ်ရက် ပျင်းရင် ပန်းခြံထဲလျှောက်သွားပါတယ်။.
လျောက်သွားမှတော့ ရောက်တတ် ရာရာ
1 ရောက်တတ်ရာရာ ဒီဇိုင်း တစ်
2ရောက်တတ်ရာရာ ဒီဇိုင်း 2
3 မချို မချဉ်
7 လုပ်ငန်းခွင် တစ်
8 လုပ်ငန်းခွင် 2
ကဲ ကိုလတ်ကြီးပြောသလို ဆိုရင်တော့ သူကြီး ဆီက 200ရပြီ။
တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ ပုံတွေတင်တယ်ဆိုတာ မျှ ဝေ ပေးချင်လို့ တင်တာပါ။
ဒီလို ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဘို့ဆိုတာကိုယ့် ဘက်ကစိုက်ထုတ်မူ့အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ဒီလို မျှဝေချင်တဲ့ စိတ်ရင်း အခံ ရှိုလို့ တင်ပေးနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မရောက်ဘူးထင်လို့ ထပ်တင်လိုက်တာ ပုံထပ်သွားတယ်
ကော်နက်ရှင်ကြောင့် မပြင်တော့ ဘူး
ပြင်ပေးနိုင်တဲ့ အက်ဒမင်များက ပြင်ပေးဘို့ အကူအညီတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
တောင်ပေါ်သား says: ရိုက်လည်းရိုက်နိူင်ပါပေ့ ၊ သဘာဝပုံလေးတွေ မိုက်သဗျ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်က သူတို့ ကိုရိုက်ရင် မသိအောင်ရိုက်လုိူက်တာများတယ်
ရောင်းစားဘို့ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ပြောပြရတာပေါ့
မြစပဲရိုး says: “3 မချို မချဉ် ” ပုံလေး က တို့များ ချစ်မမ ငယ်ငယ် က ပုံ လား မသိ။ :-))))
အဲကလေး မလေး က သစ်သီး တစ်လုံးကို စားနေရင်းက သူ့မျက်နှာလေးက အဲလို့ ဖြစ်သွားတာ ချစ်စရာကောင်းလို့
Alinsett @ Maung Thura says: .ပုံတွေကို ”ဘဲ”
.ကြည့် ”ဘဲ”ကြည့်သွားပါတယ် ”ဘဲ” ပြောရမှာပါ ”ဘဲ”
ပုံရိပ်တွေကို သတင်း အချက်အလက် ပေးသူလို့”ဘဲ”
တစ်ခုခု ရယူခွင့် ရသူ အဖြစ်နဲ့”ဘဲ”
.ပြောတတ်တော့လို့. . .
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ကြည့်မိရင် ဖြန့်တွေးစရာတွေအများကြီးပါဘဲ